Arsenal Oo Kor U Qaaday Xiisaha Ay U Qabto Goolhayaha Kooxda Barcelona Neto.
Home Wararka Ciyaaraha Arsenal oo kor u qaaday xiisaha ay u qabto Goolhayaha kooxda Barcelona...
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay kor u qaaday xiisaha ay u qabto saxiixa goolhayaha kooxda Barcelona ee Neto xagaagan.
Mikel Arteta ayaa durba dhaq dhaqaaq ka sameeyay suuqa kala iibsiga isagoo lasoo saxiixday Nuno Tavares oo ka yimid Benfica iyo Albert Sambi Lokonga oo ka yimid kooxda Anderlecht, inkastoo Gunners ay isha ku heyso inay ganacsi badan sameyso isbuucyada soo socda.
Goolhaye ayaa noqonaya hal boos oo uu Arteta diirada saarayo, madaama uu doonayo inuu tartan badan u muujiyo lambarka koowaad ee haatan Bernd Leno .
Sida laga soo xigtay HITC , Arsenal ayaa qarka u saaran inay kula dagaallanto kooxda ay xafiiltamaan ee Tottenham Hotspur si ay u hesho saxiixiisa, inkastoo wakiilka Neto uu u arko Gunners inay tahay ‘midka ugu macquulsan’.
Barcelona ayaa 31 jirkaan kala soo wareegtay kooxda Valencia sannadka 2019 22.45m, in kastoo haddii kooxda reer Catalan ay iibinayso xagaagan, uma badna inay heli doonaan lacag la mid ah tan suuqa kala iibsiga.
Neto, oo kaliya hal kulan u saftay xulka Brazil, ayaa keliya 17 kulan u saftay tartamada oo dhan Barcelona, ​​oo ay ku jiraan 12 xilli ciyaareedkii hore.
Previous articleWararka Suuqa kala iibsiga: Chelsea oo Dalabkii ugu danbeeyay ka gudbineysa Haaland, PSG oo lasoo wareegeysa Ronaldo iyo Qodobo kale
Next articleRaphael Varane oo doonaya inuu dhameystiro heshiiska uu ugu biirayo Man United maalmaha soo socda.